ဦးကိုကိုလှိုင်သိအောင် ပြောပါရစေဗျာ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဦးကိုကိုလှိုင်သိအောင် ပြောပါရစေဗျာ..
Posted by koyin sithu on May 25, 2012 in Copy/Paste, Facebook, Think Different | 28 comments
ဂျပန်မှာ ၁၉ ၉ ၅ ခုနှစ် မှာ ကိုဘေးငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ကိုဘေးတစ်မြို့ လုံး ပျက်ဆီးမီးလောင် လူတွေဒုက္ခရောက် လျှပ်စစ်မီးမလာ၊ ဂက်စ်မလာ၊သောက်သုံးရေမရပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်ဟာ သူတာဝန်ယူထားရတဲ့ မြို့ နယ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သောက်သုံးရေ ရရှိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားပါတယ်။ တာဝန်ရှိမှု၊တာဝန်ယူမှုကို အသက်နဲ့ လဲသွားပါတယ်။
ခင်ဗျားလည်း ပြည်သူ့အခွန်ကနေလစာလခယူပြီး ပြည်သူအပေါ်မှာ လက်လွယ်စပါယ် ပြောဆိုမှုအတွက် တာဝန်ယူရဲတယ်၊ ရှက်တတ်တယ်ဆိုရင် သမတအကြံပေးနေရာက ထွက်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
( ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဇော်မင်း ကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။)
Kyaw Aye …. Chiyoda-ku, Tokyo
Comment of the day….!
Written by: Hm SoeMinn
အမှန်ဆို ဒီလျှပ်စစ်မီး မပေးနိုင်တဲ့ ကိစ္စကို လူထုကျေနပ်အောင် ဖြေရှင်းနည်းက အရမ်းလွယ်တယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်…။ ဓာတ်အားပေးတိုင် တတိုင်လောက် မိုင်းကွဲတာနဲ့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး မှောင်မဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေမျိုး၊ မိုးမရွာလို့၊ ရေမရှိလို့ဆိုတဲ့ လူရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဆင်ခြေမျိုးတွေ မပေးသင့်တော့ပါဘူး။ ခုလို မီးမှန်မှန်မရတာလည်း ၂၄ နှစ်တောင် ရှိနေပါပြီ။ ဒီဆင်ခြေတွေနဲ့ ၂၄ နှစ်စာ ဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
တကယ်ဖြစ်ရမှာက ပြည်သူလူထု ကျေနပ်အောင် ၀န်ချတောင်းပန်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်ကနေ အနားယူစရာ၊ ထွက်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ပြည်သူကို တကယ် စေတနာရှိတဲ့အစိုးရ၊ ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို တကယ် ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ အစိုးရဆိုရင် အရင်က လုပ်နည်းကိုင်နည်းတွေ မှားခဲ့တဲ့အတွက်၊ အနာဂတ်ရေရှည်စီမံချက်တွေ လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ နားလည်ပေးဖို့နဲ့ ရေရှည်စီမံကိန်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်နေပါပြီဆိုတဲ့ တိကျသေချာတဲ့ ပလန်တွေနဲ့ ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ မရိုင်းပါဘူး။ အနှစ် ၂၀ ကျော်တောင် သည်းခံနေနိုင်ခဲ့သေးတာပဲ…။ တခုပါပဲ… အရင်က အမှားတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ၀န်ခံပြီး ခဏလောက် သည်းခံနားလည်ပေးဖို့ တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဂျန်စက်တွေနဲ့ လျှပ်စစ်ပေးမယ်ဆိုတာ ယာယီဖြေရှင်းနည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ လူတွေကို ခဏတာ မျက်စေ့လှည့်ပြ ငြိမ်အောင် လုပ်ရုံသပ်သပ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ ကုန်ကျစားရိတ်က နည်းမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် လိုငွေတွေပြနေတဲ့ နိုင်ငံအတွက် မထောင်းသာလှပါဘူး။ ဒီလို ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကို သေချာ မရှင်းဘဲ လတ်တလော ယာယီ ပြေလည်ဖို့သာ ရည်ရွယ်ပြီး အပေါ်ယံ ဖြေရှင်းနည်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ပေါင်းလည်း များနေပါပြီ။ အဲဒီအတွက် အမှားပေါင်းများစွာနဲ့ ငွေကြေးများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာတာပါ။
အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေကို လူမိုက်စကား၊ လူပိန်းစကားတွေ မစာမနာ ပြောဆိုကြတာ ရပ်တန်းက ရပ်ပြီး တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် တကယ်စဉ်းစား အလုပ်လုပ်ကြပါတော့လို့သာ..
(ကျနော်နဲ့ သဘောထားကော အတွေးအမြင်ပါတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ဖေ့ဘွတ်မှ ကူးယူတင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြည်သူ့ အကျိုးအား ကြည့်မြင်တတ်ကြတဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေလည်း ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိကြပါစေဆုတောင်းမိတယ်ဗျာ)
စားလို့ဝ ဂုဏ်ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခုလဲ ရအပြီးမှာ အတိတ်က ဗယုတ်မဟုတ်တာတွေ ပြန်အတူး ခံရမှာ စိုးလို့များလား ။
တက်သုတ်ရိုက် အစီအစဉ်တွေက အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး၊ ကျတော်တို့စက်ရုံတစ်ရုံထဲလည်ပတ်ဖို့တောင် ၆၂၅ ကေဗွီအေ Generator ၂ လုံး ထားပြီး အလှည့်ကျ မောင်းရတယ်။ ဒီဇယ်က ပျမ်းမျှတစ်နာရီကို ၈ ဂါလံကနေ ၉.၅ ဂါလံအထိကုန်တယ်၊ ဒါအင်ဂျင်အသစ်မို့ပါ။ အင်ဂျင်ကျသွားရင် ၁၁ ဂါလံလောက်ကုန်တယ်။
ဒီတော့ ကိုရင်စည်သူပြောတဲ့ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ ကုန်ကျစားရိတ်က နည်းမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမုချလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီ ၅၀၀ ကေဗွီအေ၊ ၃၀၀ ကေဗွီအေတွေက မြို့ကိုမီးပေးဖို့ဆိုတာ ဟာသပဲ၊ 10 ဒါမှမဟုတ် 20 မဂ္ဂါဝပ်လောက်ဆို လူကြားလို့ကောင်းပါရဲ့….
သမတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် ကို ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ဆွေး နွေးတာ နားထောင်ဖူးပါတယ်။
စာဖတ်အားကောင်းတယ်၊နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားအောင် ပြောနိုင်သူလို့မှတ်ချက်ပေးမိပါတယ်။
အခုကိစ္စမှာ မျက်နှာရချင်ဇောနဲ့ကျက်ထားတဲ့စာကြောင်းလေးကို ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်မဆိုင် မစဉ်းစားတော့ပဲ
အတည်ပေါက် ပြောချလိုက်တော့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ရတာလို့သုံးသပ်မိပါတယ်။
သမတအကြံပေးတွေဟာ ကိုယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်ရာကိုသာ အကြံပေးသင့်ပါတယ်။
အားလုံးသိတယ် တတ်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အခု လျှပ်စစ်မီး ကိစ္စက နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တယ် ။
နည်းပညာကို တကယ်တတ်ကျွမ်းကျင် နားလည်တဲ့သူသာ ဝင်အကြံပေးသင့်ပါတယ်။
အဲ.. မိုးနတ်မင်းကို ဆုတောင်းတိုင်တည်တာ ဘယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်က သင်ပေးတာလဲတော့မသိဘူး။
ဒီလိုအဓိပါယ်မရှိ အပေါစား စကားလုံးတွေ နဲ့ပြည်သူတွေကို သွားမစမ်းပါနဲ့ ။
ငါသာအသိဆုံးဆိုတာမျိုးတော့ မလုပ်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှာ တကယ်တော်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေဆီက အကြံတောင်းဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့ ။အထင်မသေးပါနဲ့ ။
ရာထူးကြီးတဲ့သူတွေ သာပိုသိပိုတတ်တယ်ဆိုပြီး ဆက်ညာနေရင် တိုင်းပြည်နာပါလိမ့်မယ်။
အေဒီ ၁၇၆၀ ကလူအတွေးနဲ့ အေဒီ ၂၀၁၂ ကလူအတွေး သိပ်မကွာဘူး။
သိပ်တော်တဲ့ စစ်ခွေး အကြံပေးပါလား။သူ့ နေရာမှာ သာဆိုရင် ရွှေလီ-မန်ဆမ်
တာဝါတိုင် ဗုံးခွဲတဲ့ကောင်တွေကို အားပေးသင့်ပြီး ရွှေုဂက်စ်ပိုက်လိုင်းကို
ပြောရလျှင်လေ …. သူတို့အိမ်မီးမပျက်လို့ …. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိလို့ အဲ့လိုပြောတာပဲ … ။
သူတို့အိမ်မှာ မီးပိတ်ပြီး ဘယ်အချိန်များ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသလဲသိချင်လိုက်တာ … ဘုရားမီးပူစော်တဲ့အချိန်တောင် ထွန်းမယ်မထင်ဘူး ။
ရာထူးကြီးကြီးယူထားပြီး စကားကို လက်လွတ်စပယ်ပြောတာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ ကိုယ့်စကားကိုယ်ရုတ်သိမ်းပြီး ပြည်သူတွေကို တောင်းပန်သင့်ပါတယ် ။
သူက ဒီလောက် အဆိုးကြီးလဲမဟုတ်ဘူးလို့
အညံ့ကြီးလဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ထားတာ…။
ကြည့်ရတာ နေပူတော်ရောက်သွားရင် စကားမှားတတ်ကြတယ်ထင်တယ်…
လျပ်စစ်မီးအကြောင်းကြားနေပြောနေရတာလဲ များပါပြီ ။
ဦးကိုကိုလှိုင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ။ပြည်သူထဲကို တစ်ရက်လောက်လက်တွေ့ဆင်းကြည့်ပြီးမှအခုပြောမယ့် စကားကိုပြောပါလား ။ ဦးကိုကိုလှိုင်တို့အိမ်မှာရော အဲဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလား ။အဆင်ပြေမလားဆိုတာသိရအောင်လို့ ။
ဟိုအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကပြောဘူးတယ် တစ်အိမ်ထောင်ကို မီးလုံးတစ်လုံးလျော့ထွန်းရင် တံတားကြီးဘယ်နှစ်စင်း ဆောက်လို့ရတယ်ပြောပြီး ပြောတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာတော့ နေ့ရော ညပါ သုံးနေတဲ့ လျပ်စစ်မီးတွေ ……… ။ အခုလဲ အဲလိုသဘောမျိုးပြောပြန်ပြီလား ။
“တစ်အိမ်ထောင်ကို မီးလုံးတစ်လုံးလျော့ထွန်းရင်” …ဆိုတဲ့ အကြံပေးတာ မျိုးဟာ ကောင်းတဲ့ အကြံပါ။
ဒီလိုသာပြောမိရင် အခုလို အပြောခံရမှာ မဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ပါတယ်။ မီးတွေ၊အဲကွန်း၊ ပန်ကာတွေဖွင့်ပြီး မပ်ိတ်ပဲထားတာတို့ကလည်း မလိုအပ်ပဲဖြုန်းတီးနေတာပဲလေ။ ကျမမိတ်ဆွေတွေထဲက တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင် သူတို့ အိပ်ခန်းတွေကို ၂၄နာရီအဲကွန်းဖွင့်ထားတယ်။ လူမရှိလည်းဖွင့်ထားတယ်။ တနေကုန်အပြင်သွားနေလည်းဖွင့်ထားတယ်။ သူတို့မီတာခတတ်နိုင်လို့ သုံးတာဆိုပေမယ့် ဖြုန်းတီးခြင်းတမျိုးပဲ။ နောက်တချို့ဆိုလည်း ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမီတာကို မတက်အောင်လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်သုံးပေါ့။ အဲဒါတွေကိုသေချာပြန်ကြပ်မတ်သင့်တယ်။ လျှပ်စစ်မီတာတစ်လုံးမှာ တစ်လကျသင့်သည်လို့ယူဆတဲ့ပမာဏထက်ပိုမိုသုံးစွဲသူတွေ ခိုးယူသုံးစွဲသူတွေကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ဒါဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းသင့်တယ်။ ဖယောင်းတိုင်နဲ့နေဆိုလည်း လူတိုင်း မျှမျှတတ တလှည့်စီနေရမယ်ဆိုရင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဖယောင်းတိုင်နဲ့နေပြီး အပူကို ယပ်တောင်နဲ့အံတုနေရတဲ့အချိန်မှာ မီးပြတ်တာကို ဘာမှန်းမသိတဲ့သူတွေရှိနေတယ်။ နေပြည်တော်လိုမြို့များကျတော့လည်း ညပိုင်းကြည့်လိုက်ရင် မီးတွေပဲထိန်ထိန်ညီးမြင်ရတယ်။
သမတ အကျန်ပေးတွေက ဖိုက်တာတွေ မိုက်ကယ်တွေပဲနော်
နှလုံးရည်နဲ့ လား လက်ရုံးရည်နဲ့ အကြံ ပေမှာလား
မရှက်တတ်တဲ့လူကတော့ ဒီလိုပဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး မသိခြင်ထောင် ထောင်ပြီး နေနေဦးမှာပါလားနော်..
ပြည်သူလုထုအပေါ် ဖြေရှင်းနည်းတွေ၊ ပြောဆိုပုံတွေက အလွယ်လုပ်နေသလိုဘဲ။
နွေရာသီတိုင်းဖြစ်နေတာကို တစ်မိုးလုံး၊ တဆောင်းလုံး ကြိုတင်စဉ်စားပြီး စီမံမှု့တွေဘာမှမရှိတာ။
ဒဘတ်ရေ… ဘာစာအုပ်မှ ရှာဖတ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ..
အကျန်ပေးကြီးတွေ လောကနီတိလေး ကျေအောင် ဖတ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်
အားလုံးအေးဆေးဖြစ်သွားမှာပါ။ တော်ပီ.. မီးပျက်နေတုန်း..
ပြည်သူတွေအကြောင်း သေချာသိချင်ရင် အခြားဘယ်သူကိုမှ အကြံပေးတွေ။ဘာတွေခန့်မနေပါနဲ့….။ ပြည်သူ့အကြောင်းကို အရပ်ထဲဆင်းပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် နားစွင့်လိုက်ပါ။ပြည့်သူတွေခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းတွေ အစုံသိသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ငါ့စကား နွားရပြောတတ်တဲ့ လူမျိုးကိုအခု ကာလမှ လက်ညိုးထိုးပြဆိုရင် ရာထူးကြီး၊ဂုဏ်ဒြပ်ကြီးတဲ့လူတွေချည်းဖြစ်နေပါလား။
သမတရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုကိုလှိုင် အကြောင်း စပြီးပြောပြဖို့ ဖေါ်ပြဖို့ လိုပါပြီ။ ဒီ နိုင်ငံရေးအကြံ ပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုကိုလှိုင်ကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV4ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ မြင်တွေ့မှာပါ။ နိုင်ငံတကာ ရေးရာတွေကို မစားရ၀ခမန်း လျှာအရိုးမရှိတဲ့အတိုင်း ပြောနေသူတဦးဆိုတာကို။
တကယ်တော့ ကိုကိုလှိုင်ဟာ ဒီ နအဖလက်ပါးစေအကြီးစားတဦးပါ။ စာရေးဆရာလိုလို နိုင်ငံတကာရေးရာ သုတေသီ လိုလိုနဲ့ နအဖပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကျော်ဆန်းရဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းမှာ အကြံပေးအရာရှိအဖြစ် လုပ်နေခဲ့သူပါ။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က ပြင်ဦးလွင် DSA စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်းဖြစ်ပြီး ကကကြည်းမှာ တာဝန်ယူခဲ့ကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ စစ်ဦးစီး (ပထမတန်း) သုတေသနအဆင့်နဲ့ နအဖသန်းရွှေတို့အတွက် အကြီးစားလက်ပါးစေ ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ဒီလို နအဖပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ကျော်ဆန်း လက်အောက်မှာ သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း အကြံပေးအရာရှိ ဖြစ်နေခဲ့ချိန်မှာ နအဖတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့် ချိရေးခြေလှမ်းတခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသတင်းဂျာနယ်ဆိုပြီး Northern Star Journal ကို စတင်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲက တ ဦးပါ။ ကိုကိုလှိုင် တို့ဟာ ဒီ Northern Star ဂျာနယ်ကနေ ကလောင်အမည်ခွဲတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ သူရဲဘောကြောင်စွာ ဆောင်းပါးတွေကို အမည်ရင်းတွေ မဖေါ်ရဲဘဲ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုကိုလှိုင်ဟာ ဖော်လံဖားလုပ်ပြီး နအဖ သန်းရွှေရဲ့အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံအောင်မြင်ရေးအတွက် ကလောင် နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆောင်းပါးတွေရေးခဲ့တယ်။ အာဏာရှင် သန်းရွှေ အလိုကျ ဆောင်းပါးတွေရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တယ်။
သိန်းစိန် အခု သမတဖြစ်လာတဲ့ နောက်ခံပါတီ ကြံ့ဖွတ်က စိမ်းလဲ့ရွှေပြည်နဲ့ နွယ်သာကီဂျာနယ်စာစောင်တွေကို ထုတ် နေချိန်မှာ တဘက်ကလည်း ကိုကိုလှိုင်တို့က ဒီ Northen Star ဂျာနယ်ကို ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နအဖလက်ပါးစေ အကြီး စား ကိုကိုလှိုင်တို့ဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ ကို ရေးသားခဲ့ကြတယ်။
နအဖလက်ပါးစေအကြီးစား ကိုကိုလှိုင်ရဲ့ကလောင်အမည်ခွဲတွေထဲမှာတော့ စည်သူအောင်၊ ကိုကိုလှိုင်(မြင်းမူ) နဲ့ လှိုင် အောင် ဆိုတဲ့အမည်တွေက အများဆုံး အမည်ခံရေးသားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဝင်တိုက်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသတွေက မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ သေလုမြောပါး ဘေးဒုက္ခကြုံနေစဉ်အတွင်းမှာ နအဖရဲ့ဝါဒဖြန့်ချိရေးသတင်းစာထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကြောင့် ဖတ်ရသူ သိရ သူတိုင်း ဒေါသအမျက်မျက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၉) ရက်နေ့ ထုတ် နအဖရဲ့ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ (၈) မှာ “နှစ်အကူးမှာတော့ ပုရစ်ဖူးတို့ ဝေကြပေလိမ့်မည်”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သစ်ပင်တွေပြိုလဲရှင်းသွားတာကြောင့် ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး အထက်ပစ္စယံအနားထိကို အိမ်ဝရံတာကနေ လှမ်းဖူးမြော်ခွင့်ရတာမို့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကို ကျေးဇူး တင်ရတယ်ဆိုပြီး အစချီကာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကို သိန်းပေါင်းမြောက်မြား စွာသော မြန်မာပြည်သူတွေ သေကြေပျက်စီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ဒီလိုရေးသားမှုဟာ အင်မတန် မသင့်လျော်လွန်းလှ တာကို အားမရသေးဘဲ၊ နအဖသန်းရွှေတို့ရဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ခုတုံးလုပ် ဒေါ်လာငွေ တောင်းရမ်းကောင်းဖို့အတွက် အလိမ် အညာ ဟန်ပြလုပ်ရပ်တွေကို ချီးမွန်းရေးသားပြထားပြီး၊ ဆောင်းပါးနောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံတကာက နာဂစ်မုန်တိုင်း အလှူ ပစ္စည်းတွေ အစားအသောက်တွေထက် ချောင်းမြောင်းထဲမှာ ငါးရှာစား၊ ဖားရှာစားဖို့ကို ပြောဆိုရေးသားထားတာကတော့ အလွန်ကို မိုက်ရိုင်းစော်ကားလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သား မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံတကာ ပြည်သူများက ကိုယ်ချင်းစာပြီး စေတနာထက်သန် စွာနဲ့ ပေးပို့လှူဒါန်းကြတာကို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း မကူညီ သူများကူညီတာလည်း နှောင့်ယှက်ကြတဲ့ သန်းရွှေတို့ အာဏာ ရူးတွေဘက်ကို ဖော်လံဖားပြီး ရေးသားတာထက်ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြသူ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာ တရား ခေါင်းပါးစွာနဲ့ ဒီဆောင်းပါရေးသားသူ “လှိုင်အောင်” ဆိုသူကတော့ အခု သိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင် “ကိုကိုလှိုင်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူ သိရအောင် ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလို ဆောင်းပါးရေးသားပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို စော်ကားခဲ့သူ လှိုင်အောင် အမည်ခံ လူယုတ်မာ ကိုကိုလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါးကို အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် လှိုင်အောင် က “လူပေါင်းသန်းနှင့် ချီတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ နာဂစ် လေဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာ” နိုင်ငံတကာ အကူအညီ မလိုဘူး၊ ဖားရိုက် စားပြီးနေလို့ရတယ်” …. ဒါ့ အပြင်
“ရွှေတိဂုံဘုရား စိန်ဖူးတော်ကို မြင်ရလို့၊ လူ ၁သိန်း ခွဲကျော်သေဆုံး၊ (၂.၅) သန်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေ ခဲ့တဲ့ လူသတ် နာဂစ်မုန်တိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း”
ဦးနှောက်မရှိ၊ လူသားမဆန်တဲ့ အောက်တန်းကျကျ ရေးသားထားတာကို ဖတ်ရသူတိုင်း သိရသူတိုင်းက ဒီဆောင်းပါးရှင် ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဆောင်းပါးရှင်ကို ကြိုးနဲ့တုတ်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသက ချောင်းမြောင်းတွေထဲ သွားပစ်ချပြီး သေဆုံးသွားရတဲ့ ပြည်သူတွေအလောင်းတွေကြားထဲ နှစ်သတ်ပြီး သူ့ကို ငါးစာ ဖားစာ လုပ်ပစ်ချင်လောက်တဲ့ထိ အများပြည်သူတွေ ဒေါသထွက်ကြရပါတယ်။
ငါးရှာစား ဖားရှာစားဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ လှိုင်အောင် ကတော့ အာဏာရူး သန်းရွှေ တို့ရဲ့လက်ပါးစေအကြီးစား ယခု သိန်းစိန် ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေးခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ ကိုကိုလှိုင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူအများ သိကြပြီမို့ ဒီ လူယုတ်မာ ကိုကို လှိုင် ကို ငါးစာ ဖားစာကျွေးဖို့ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။
ယခုလည်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ မီးမလာလို့ အမှောင်ထဲမှာ နေ့စဉ် နေထိုင်နေရတဲ့ဘ၀၊ ရေမရှိလို့ ရေငတ်ဒဏ်ကို ခံစားနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေကို ကိုယ်ချင်းမစာသူတွေထဲမှာ ကိုကိုလှိုင် လည်း ထိပ်ဆုံးထဲက တယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါပြီမို့ ကိုကိုလှိုင်ကို ပြည်သူ့ပေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ခံစေဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်။
ဒီ လူယုတ်မာ ကိုကိုလှိုင် က သမတ အကြံပေးတက်လုပ်နေပြီး လျှပ်စစ်မီးမလာလို့ ဆန္ဒပြကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြံ ပေးတဲ့ စကားတဲ့ “ဂျပန်မှာ Nuclear Facility တွေ ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး Nuclear Plant တွေ အကုန် ပိတ်တယ်။ အခု စက်ရုံ ၄၀ မှာ နှစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာ မီးမပျက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူက ခြိုးခြံချွေတာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ စေတနာနဲ့ ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ကလည်း ဖယောင်းတိုင်တွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ် ထွန်းပြီး မီးလေးပိတ်ထားလိုက်ကြပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် သမတ အကြံပေးအဖွဲ့ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတာပါ။
လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ရေလာမှာ ဖြစ်တာလားဆိုတာနဲ့၊ အခုမှ လျှပ်စစ်မီးက မလာတာလား၊ အခုမလာတဲ့ ရေ ကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး လျှပ်စစ်မီး မရတာလားဆိုတာတွေကို မေးမြန်းလိုပါတယ်။
ပြည်သူအပေါ်မှာ စာနာတရား လုံးဝမရှိတဲ့ ကိုကိုလှိုင် ရဲ့ ဖြုတ်ဦးနှောက်က ထွက်လာတဲ့ အကြံ၊ ပြည်သူ့မျက်နှာကို ငဲ့ ညှာကြည့်ဖေါ်မရတဲ့ ကိုကိုလှိုင် ရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်ဆိုရဲတဲ့စကားတွေကို လက်ခံကြတဲ့သူတွေ အကြံပေးတဲ့သူရော အကြံ ယူတဲ့ရော အတူတူနဲ့အနူနူကြီးပဲလို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ပြောလိုက်ရပါတယ်။
ကိုနိဂီမိရေ.. ဒီလိုမျိုး မိုးနတ်မင်းဆုတောင်းခိုင်းတဲ့ လူဂျီးရဲ့ သမိုင်းကို
ပြန်တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူတင်တယ်ဗျ… MRTV4မှာတော့
အသံအေးအေးလေးနဲ့ နိုင်ငံတကာအကြောင်းတွေ ချက်ကျလက်ကျ
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနေတာ တွေ့တော့ ကျနော်တောင် တော်တော်လေး
အထင်ကြီးသွားမိတယ်… ခုတော့ … သား သိလိုက်ရပါပီ.. သိလိုက်ရပါပီ….
ရွှေအကြောင်း ဖယောင်းသာသိတဲ့ ဒီလူ့အကြောင်းလဲ ကိုနိဂီ့ပြောမှ သိသလိုတောင်
မီးပျက်တယ်.. မိုးရွာတယ်… အထီးကျန်တယ်… မိုးမိတယ်.. ခြင်ကိုက်တယ်…
ဒီအကြံပေးတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးဝေး နေနိုင်အောင် ယတြာချေရတော့မယ်…
ပြည်သူအကြံပေးအဖြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေမီးမသုံးကြဘို့ အကြံပေးနေတာလား။
မန်းတလေးတိုင်းလျှပ်စစ်က မမကြီးဒေါ်အေးအေးမင်း ပေးတဲ့အကြံကခင်ဗျားထက်သာသွားပြီ။
ခုဆိုပြည်သူတွေက မိုးနတ်မင်းကို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းနေပြီလေ။
They leave ppl in dark place since many many years ago!! Dont care and dont consider anythings about black out! Now ppl tried to expose their right yet they are still quiet,,not taking action seriously ,,,Actually by right Minister should resign from position coz od unable to handle his responsibility .Now every almost day ppl are keep and showing their right in yangon and some places,,,,,,,,so wish and hope that somethings effect will come very soon for our ppl in Burma.
အောင်မြတ်လေး..သမတ အကျန်ပေးချီးရဲ့ ..သမတ ပေးတဲ့အကျန်ကိုပဲ ထိုင်စားနေတယ်ထင်ပ..
သမ္မတကြီးရဲ့ လက်ရှိအကြံပေးတွေမှာ အဲဒီလို အီးယောင်ဝါးတွေ ပါနေမှန်းသိလို့ 
ကဏ္ဍအလိုက်အကြံပေးတွေ တိုးပြီးခန့် တော့မယ်တဲ့။
ဒါမှ အခုလို ညာဝါးအကြံပေးတွေကြောင့် သမ္မတကြီးရဲ့ သိက္ခာကျစရာ မဖြစ်တော့မှာ။
အမှန်တကယ် တော်တဲ့ အကြံပေးတွေ၊တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ အကြံပေးတွေ၊
နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာအမှန်ရှိတဲ့သူတွေကိုသာ ပါဝင်စေချင်တယ်။
ခွင်ရှာချင်လို့အဖွဲ့ အစည်းမှာ ငွေနဲ့ ပေါက်ပြီး
လူကြီးဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေ“ မြန်မာနိုင်ငံ xxxxxxxxx အသင်း” တွေမှာ အများကြီးရှိတယ်။
ဒီလို ကိုယ်ကျိုးရှာ လူကြီးယုတ်တွေ သမ္မတကြီးခေတ်မှာ ရှင်းပစ်သင့်ပြီ။
သမ္မတကြီးရဲ့ အကြံပေးတွေ သူတို့ ဝါးပြီးသား “အကျန်”တွေသာ
ပြည်သူတွေကို ပေးမဲ့ “အကျန်ပေး” တွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းနေရမှာပေါ့လေ။
ကြည့်ရတာ သမ္မတ အကြံပေးတွေက ဘာအရက်ကောင်းတယ်တို့ 
ဘယ်လို အဆီအနှစ်တွေစားကောင်းတယ်တို့ ကအပြင် မပြောတတ်
အဲ့လိုကောင်မျိုး မွေးလာမယ်မှန်း သိရင် ဘေး ပန်းပစ်ပါတယ်ကွာ…
ခု ချက်ချင်း ထွက်လိုက်ပါ. …
အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
မောင့်ထက် သိ သူ နောက်တယောက် မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ဈေးရောင်းကောင်းသူဂျီးရယ်..
မိုးနတ်မင်း တိုင်တည်တဲ့ အင်ယာမ ဂျီး ရယ်..
နောက်လူ ကို ချိုမချို မြည်းဖို့ စောင့်နေတယ် ဆိုတာလည်း
ဟာကျူလီ (ကသာ) ကာတွန်းကို အကြိုက်ဆုံးဗဲ…။ ကျုပ်တို့သဂျီးလိုပေါ့ ရွာထဲမှာ သူများ ဆောင်းပါး စာမူတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ် တင်ပါများတဲ့အခါ ရှိရှိသမျှ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်း တိုက်တွေအားလုံးကို ဝယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်.. ဟိုဖက်က အဟုတ်မှတ်လို့ ဘယ်ဈေးပေးမလဲမေးတော့ ကြိုက်ဈေးပြော ပွိုင့်လိုသလောက်ပေးမယ်ဒဲ့…
ခွိ ခွိ ခွိ
ဒီ ကြောင် တော့ မိုးအေးအေးနဲ့မြည်းပလိုက်ရ ။
မူရင်း ဆိုဒ်ကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။